Archive du 02-août-2021
Fifofoana aina manampahefana 5 no nokendrena hovonoina, 21 voasambotra
Taorian’ny fanambarana ofisialy ny 21 jolay ny fahasamborana ireo olona noahiahiana voalohany tamin’ilay raharaha famonoana ny Filoham-pirenena,
Valalanina tanteraka amin’ny sangodim-panina politika eto amin’ny tany sy ny Fanjakana ny vahoaka Malagasy. Tsy fantatra intsony izay marina sy diso eo anatrehan’ny resabe maro samihafa.
Iray volana mialohan’ny fampivondronana Mahavelom-bolo ny zava-bitan’ireo mpilalaon’ny Barea
Azo lazaina ho mahavelom-bolo ihany ny vitan’ireo mpilalao Malagasy voaantso nandrafitra ny ekipam-pirenentsika farany teo raha mijery ireo lalao vitan’izy ireo tamin’ity herinandro ity.
Kamiao sy lamasinina nifandona tao carion Hadihadiana anio ny mpamilin’ilay kamiao
Nisehoana lozam-pifamoivoizana tany Carion afak’omaly hariva. Kamiao mpitatitra vokatra izay ana mpivarotra iray no nifandona tamin’ny lamasinina.
Patrick Raharimanana “Misy fivakisana amin’ny Filoha sy ny Katolika matoa…”
Nandritra ny fivahinianany tao amin’ny Fahitalavitra Real TV Madagascar no nanehoan’i Patrick Raharimanana hevitra momba ny raharaham-pirenena,
Resaka fanalana 3000 ariary anaty “bourse” Miantso fanadihadiana sy fampitsaharana izany ny SECES
Aoka tsy ho potehina ny oniversite miankina amin’ny fanjakana na dia maniry toy ny anana azan y oniversite tsy miankina, hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo,
Antoko Otrikafo “Tsy azo adinoina ny France Afrique sy Big pharma”
Efa asan’ny tambazotra France Afrique, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Otrikafo ny fifofoana na famonoana mihitsy ireo filoham-pirenena na fanjakana afrikanina hitan’ny fanjakana frantsay
Betafo sy Mandoto Distrika ahitana aretin-kisoa betsaka indrindra
Ny distrikan’i Betafo sy Mandoto, any amin’iny lalam-pirenena fahafito iny hatreto no fantatra fa manana taha avo indrindra amin’ny aretin-kisoa manerana an’i Madagasikara.
Famakiana ady amin’ny Frantsay Nanenina ary lasa mitandrina ny Fanjakana ?
“Miasa amin’ny sampan-draharaham-pitsikolovana Frantsay i Paul Maillot. Mazava be ny tanjona, ny Frantsay no tompon’ny Africa Intelligence.
Lozam-pifamoivoizana teo Ambohipoloalina Mompera iray no maty, iray hafa tapa-tanana
Mompera iray no maty ary mompera iray namily ny fiara kosa no naratra, tapa-tanana vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Tsy nisy naninona ireo mpianatra ho frera roalahy tao aoriana.
Politika avo lenta Efa nandrasana hatramin’ny janoary i Paul Rafanoharana ?
Tsy hita tabilao firy eo amin’ny toe-draharaha politika indray aloha ny resaka fanovana ny governemanta satria mibahan-toerana ilay raharaha famonoana ny filoham-pirenena.
Sekoly ambony tsy miankina Maro ireo mpianatra no misedra olana
Maro ireo mpianatra eny anivon’ny sekoly ambony tsy miankina no misedra olana vokatry ny fiparitahan’ny valan’aretina Covid 19.
Sosialim-bahoaka miha ratsy Hiakatra 30 000Ar sy 55 000Ar ny gonin-tsaribao
Tsy hivarotra latsaky ny 500Ar intsony ny mpivarotra arina fandrehitra na "charbon" eto Antananarivo, araka ny fanambaran’izy ireo ny faran’ny herinandro teo.
Telma Coupe de Madagascar Hangotraka ny manasa-dalana
Ny alarobia 4 aogositra izao no ho tontosaina eny amin’ny kianjan’ny Elgeco plus By Pass ny manasa-dalan’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara eo amin’ny taranja baolina kitra na
Andry Rajoelina Telo taona omaly ilay hoe: “hanavotra an’i Madagasikara”
Feno telo taona katroka omaly 01 aogositra ny fanambarana nataon’Atoa Andry Rajoelina nilaza tetsy Mahamasina hoe:
Mpanabe asaina manao “TGV Fanabeazana” Depiote mpanao lalàna mihitsy no mampadika lalàna
“Ho fankasitrahana ny tontolon’ny fanabeazana dia am-pitiavana no nanasanay mivady ireo solontenan’ny “TGV Fanabeazana” isaky ny ZAP 23 eto amin’ny Cisco Tsiroanomandidy hiara-miasakafo,